‘अरू दसैँ मनाउन व्यस्त हुन्थे, म भने अस्पतालमा अपरेसनमा व्यस्त’ | Ratopati
डाक्टरको दसैँ अनुभव
personअञ्जु तामाङ exploreकाठमाडौं access_timeअसोज २१, २०७६ chat_bubble_outline1
काठमाडौँ । डाक्टर सन्तोष पौडेल । अध्ययनसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा दिन थालेको १७ वर्ष भयो । हाल उनी हाडजोर्नी विशेषज्ञका रूपमा वीरअन्तर्गतको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत छन् ।
विशेषज्ञ चिकित्सक बनिसक्दासम्म पनि उनलाई दसैँ होस् या अन्य चाडपर्व घरमा बसेर मज्जाले मनाएको याद छैन । यो वर्ष पनि बिदा मिल्ने हो कि होइन थाहा छैन । सबै जना दसैँको रौनकमा हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्र, सुरक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले कमै मात्रै बिदा पाउँछन् ।
तीमध्येका एक हुन्– डा. पौडेल । १७ वर्ष पहिला मणिपाल टिचिङ अस्पतालबाट काम सुरु गरे । जागिर सुरु गरेको पहिलो वर्षमै दसैँमा छुट्टी पाएनन् । सबै धेरै चिकित्सकहरू आलोपालो बिदा बसे डा. पौडेलको भागमा भने प्रसूतिवार्डको जिम्मा थियो । सेवाको सुरुवातमा दसैँभन्दा पनि कामले मन जित्नुपर्छ भन्ने लाग्यो । जोस जागरसँगै सेवामै तल्लीन भए ।
मणिपालमा अध्ययन सकेपछि मेडिकल अफिसरका रूपमा उनी तनहुँको दमौली जिल्ला अस्पताल आए । दसैँमा सेवामै बिताए । तिहारमा घर नजिकै हुँदा सेवासँगै पर्व मनाउने निधो गरेँ । भाइटीका चल्दै गर्दा एक्कासि अस्पतालको फोनको घण्टी बज्यो । अस्पतालमा पोस्टमार्टमको घटना आएको छ भन्ने जानकारी पाएँ । हतारमा टीका सकेर पोस्टमार्टमका लागि पुगेको कुरा अहिले सम्झन्छन् ।
त्यसपछि डा. पौडेल पोखरा अस्पतालमा पुगे । काम गर्दा घरै पोखरा भएको भन्दै डा. पौडेलले दसैँमा बिदा पाएनन् । दसैँको टीका लगाउन पनि कि साँझ कि बिहान घरमा पुग्ने गर्थें । अरू पर्व मनाउन व्यस्त हुन्थे भने डा. पौडेल अस्पतालमा अपरेसनमा व्यस्त हुन्थेँ । कुनै पनि हालतमा नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भन्ने सोच भएका डा. पौडेलले चिकित्सा क्षेत्रमा लागेपछिका दसैँ होस् या तिहार अथवा अन्य चाडपर्व उनी निकै कम सहभागी भएको सम्झन्छन् ।
धेरै चाडपर्व अस्पतालमा बिताउँदै आएका डा. पौडेल ०६९ सालको तिहार सधैँ सम्झनामा आइरहन्छ । सो समयमा उनी पोखराबाट देशकै जेठो अस्पताल वीरमा कार्यरत थिए । ०६९ वीर अस्पतालमा काम गर्दा तिहारमा बिदा पाएनन् । अस्पतालमा बस्दा मोटरसाइकल दुर्घटनाको बिरामी ल्याइएको थियो । अरू तिहारको माहोलमा रमाइरहँदा उनी भने बिरामीको अपरेसनमा व्यस्त थिए, नागरिकलाई नयाँ जीवन दिन लागि परेका थिए ।
छुट्टी मिलाउन नसक्दा पीडा हुन्छ
डा. पौडेल चाडपर्वमा बिदा नपाउँदा एकदमै पीडा हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् । सबै मान्छे पर्वको खुसीमा हुन्छन् । तर पर्वको समयमा बिरामीहरू भने रमाइलो गर्दा दुर्घटना पर्ने, पिङबाट लड्ने जस्ता केस बोकेर आउने गरेको डा. पौडेलको अनुभव छ । आफू बिदा नपाएर अस्पतालमा बस्नुपरेको अनि नागरिक भने पर्व मनाउने क्रममा ध्यान नदिँदा बिरामी भएर आउँदा झनै पीडा हुने गरेको बताउँछन् ।
हाल डा. पौडेलका छोरा पनि विभिन्न कुराको माग र गुनासो गर्न सक्ने भएका छन् । दसैँमा सकेसम्म छोरासँग बिताउन पाए उनका लागि ठूलो अहोभाग्य हुन्थ्यो । छोराले पनि सकेसम्म बाबा बिदाको समयमा आफूसँगै बसोस् भन्ने चाहन्छ । भारी मन बनाउँदै डा. पौडेल भन्छन्, ‘छोराको गुनासा र मागलाई भने पूरा गर्न नसक्दा यहाँ लैजानु, त्यहाँ लैजानुभन्दा बिदा मिलाउन नसक्दा मनमा पीडा हुन्छ ।’
चाडपर्वमा जनशक्ति पनि कम हुन्छन् । हामी जस्तो जिम्मेवार क्षेत्रमा बसेको व्यक्तिले परिवार समाजलाई मात्रै प्राथमिकता दिने कुरा पनि आउँदैन । तर चिकित्सक क्षेत्रमा लागेको यतिका वर्षसम्म आधा आधा, कार्यक्षेत्र विभाजन गरेर पर्व मनाउँदै आईरहेका छौँ ।
भन्छन् ‘डाक्टर भने पछि मृत्युको नजिक पुग्न लागेको नागरिकको आश पनि हामीमाथि हुन्छ । डाक्टरले मलाई बचाउँछ भन्ने आश गर्छन् । अन्य समयमा सबै आफ्नो ड्युटीमा खटिरहेका हुन्छन् । तर दसैँ तिहार जस्ता पर्वमा बिदा नबसी सेवामा खट्दा मैले ड्युटी पूरा गरेको होइन, मानवताका लागि काम गरिरहेको छु भन्ने महसुस हुन्छ । त्यो समयमा गर्व लाग्छ ।’
अरू पर्वको रमाइलोमा आफू भने अपरेसनमा खट्दाका प्रशस्तै अनुभव उनीसँग छन् ।
उनको दसैँ पोखरामा नै हुन्छ । दसैँ लामो समयसम्म हुने भएको हुँदा ड्युटीमा खट्ने र अन्तिमा घर जाने गर्छन् । कि त पहिला घर जाने अनि पर्व नसकिँदै काममा फर्किन्छन् । ट्रमा सेन्टरमै हुँदा दसैँको समयमा घरको छतमा चङ्गा उडाउँदा लडेर टाउँको, खुट्टामा ठूलो चोट लागेको गम्भीर अवस्थाको बालिकाको ज्यान बचाएको सम्झन्छन् ।
हरेक चाडपर्वमा घरमा सबैजनाको जमघट हुन्छ । उनको भने त्यही समयमा विभिन्न घटनाका लामो अपरेसन पर्छन् । गएको तीजमा डा. पौडेल आफैले आफन्तलाई खानपानका लागि घरमा बोलाएका थिए । सोही दिन अपरेसन ८ः३० मा सकिने भनेको अपरेसन रातको १०ः३० बजे मात्रै सकियो । उनी घर पुग्दा सबै जना घर फर्किसकेका थिए । भन्छन्, ‘आफूले बोलाएको आफन्तलाई भेट्न पाइनँ । कुरा गर्न पाइनँ । यस्तो हुँदा नमज्जा लाग्छ तर पनि अहिले धेरैले मेरो कुरा बुझ्नु हुन्छ ।’
डा. पौडेललाई सिनियर भएपछि जटिल घटना हेर्नुपर्ने हुँदा अहिले बिदा पाउन झनै मुस्किल बन्दै गएको छ । साथीभाइको विवाह, व्रतवन्ध जस्ता कुरामा उनी कहिले काहीँ मात्रै सहभागी हुन्छन् । सामाजिक कार्यमा सहभागी हुन उनलाई पनि निकै रहर छ । तर बल्ल कति दिनपछि अपरेसनको पालोको पर्खाइमा भएका बिरामीलाई काम छ भनेर छुट्टी लिँदा समयमा उपचार नहुने र अर्काे दिनको पालो पनि खप्टिने हुँदा पर्व तथा सामाजिक कार्यमा उनी कमै सहभागी हुन्छन् ।
हरेक अपरेसनपछि खुसी प्राप्त हुन्छ
डा. पौडेल सबैभन्दा खुसी अपरेसन सकेपछि हुन्छन् । अपरेसन सकेर बाहिर निस्कँदा आफन्तहरू ढोकामा कुरिरहेका हुन्छन् । अपरेसन सकियो राम्रो भए नभएको बारेमा आफन्तलाई जानकारी गराउँछन् । घण्टै आफ्नो मान्छेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्न बसेका आफन्तहरूलाई ठूलो राहत मिल्छ । हरेक अपरेसन पछि उनलाई मैले मानवताका लािग केही न केही गरिरहेको छु भन्ने महसुस हुन्छ । त्यही महसुसले उनलाई अगाडि बढ्न ऊर्जा प्रदान गरेको छ । उनी भन्छन्, ‘हामी चिकित्सक भनेको नागरिकका लागि नै खटिएका हौँ । त्यसैले बिरामीको अवस्था राम्रो भए नभएको बारेमा आफन्तलाई जानकारी गराउनुपर्छ, त्यो हाम्रो दायित्व पनि हो ।’
दिनमा एक डोको घाँस काट्नु पथ्र्याे
डा. पौडेल परिवारका माइला छोरा हुन् । उनका एक दाइ, एक दिदी र एक जना भाइ छन् । दाइ र भाइ दुवै जना इन्जिनियर । हाल अमेरिकामा बस्छन् । कास्कीको गाउँमै जन्मे हुर्केका डा. पौडेलका बाआमा सामान्य कृषक हुन् । उनलाई डाक्टर बन्नुपर्छ भनेर कसैले पनि भनेनन्, भन्ने व्यक्तिहरू पनि थिएनन् । धेरै अध्ययन गर्दा डाक्टर, इन्जिनियर बन्न सकिन्छ रे भन्ने कुरा चाहिँ गाउँमा सुनेका रैछन् । गाउँमा एक दुई जना आफूभन्दा सिनियर दाइ इन्जिनियर बनेको कुरा उनलाई याद थियो ।
गाउँकै विद्यालयबाट एसईई (एसएलसी) दिए रिजल्टमा डिस्टिङ्सन आयो । अध्ययन राम्रो भएकै कारण त्यसपछिको अध्ययन पनि राम्रै शैक्षिक संस्थामा पढ्ने मौका पाए । आफू अध्ययनरत शैक्षिक संस्थाको वार्षिक उत्सवमा भूपू विद्यार्थी सबैलाई बोलाउँने को को के बने भन्ने बारेमा जानकारी गराइँदो रहेछ । त्यहाँ उनले डाक्टर, इन्जिनियर, समाजसेवी, साहित्यकार, व्यवसायी, पत्रकार सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू देखे । अनि डा. पौडेललाई मान्छेले फरक फरक खालको क्षमता विकास गर्न सक्ने रहेछ भन्ने लाग्यो ।
त्यसपछि गाउँमा खेती किसानी गर्ने । दिनमा एक डोको घाँस अनिवार्य काट्नुपर्ने परिवारका सन्तान डा. पौडेललाई गाउँमा हुर्केर पनि राम्रो काम गर्न सकिने रैछ भन्ने लाग्यो । आत्मविश्वास बढेपछि छात्रावृत्तिमा मणिपाल मेडिकल कलेजमा पोखरामा अध्ययन गर्ने मौका पाए ।
उनले चिकित्सा शिक्षा सक्दासम्म गाउँमा कोही पनि डाक्टर बनेका थिएनन् । डा. पौडेल गाउँकै पहिलो डाक्टर बने । अहिले उनी यो क्षेत्रमा नै निकै खुसी छन् । त्यो किशोरावस्थामा गरेको निर्णय अहिले सही गरेछु भन्ने लागेको छ । दाइभाइ दुवै जना अमेरिकामा छन् र पनि आफ्नै देशमा बसेर सेवा प्रदान गर्नु नाम कमाउनु राम्रो भएको भन्दै डा. पौडेलप्रति दुवै जना दाजुभाइ गर्व गर्छन् ।
नेपाल सरकारकै लगानीमा अध्ययन गरेपछि सरकारी अस्पतालमै काम गर्ने र नागरिकलाई सेवा दिने सोचका साथ यस क्षेत्रमा लागेका डा. पौडेल अहिले आफ्नो कामप्रति निकै ध्यान दिन्छन् । सरकारले डाक्टर बनाएपछि आफूले पनि देशका लागि सेवा दिने अठोटका साथ दिनरात सेवामा खटिरहेका छन् ।
Oct. 9, 2019, 3:08 p.m. Raj Kumar
There are 35000 drs in Nepal and more than 50 % are working in Remote area since many years. It is better to ask those poor Doctors working in Rural and poor health system and low income than who are working in Kathmandu and earning high income from many clinic hospital, political powers, enjoying International tours !!! Rural area Doctors are leaving their family, wife, children for the humanity of their health works !! Happy dashain to all Drs working in remote area and far from their parent home.